We Fight We Win. -- " More than Media ":ွှ့ ရွှေည၀ါ၊ မဟန နဲ့ အောင်သောင်း = The Good , The bad, The Urgly
ွှ့ ရွှေည၀ါ၊ မဟန နဲ့ အောင်သောင်း = The Good , The bad, The Urgly
နောက်ကွယ်မှာ ထို့ထက်နက်ရှိုင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့ရသည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအကြား သံသယများဖြစ်စေလိုသည်
by Hawdeka Aethae on Saturday, January 7, 2012 at 3:52am
Pls read carefully, this post is dated 20th Dec 2011, but it contain important informations up to now, it also contain hidden links between gov. pls let me share again. thanks bros.
ရွှေည၀ါဆရာတော်နှင့် ဒယကာ ဒါယိကာမများ၏ အသနားခံ တောင်းပန်မှု အပေါ် မဟန ၄၇ ပါးထံမှ အကြောင်းမပြန်ပဲ နှုတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသည်။ ဒီအတောအတွင်း ၄၇ပါးနောက်ကွယ်မှ ချုပ်ကိုင်သူရှိနေသည်ဟူသော သိုးသိုးသန့်သန့်သတင်းများကိုလည်း ကြားနေရသည်။ နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးကိုင်သူမှာ ဦးအောင်သောင်းနှင့် အပေါင်းအပါတစ်စုဟု သိရသည်။ ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို ခေါ်ယူသတိပေးခြင်းမျိုးမရှိပဲ ပြင်းထန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုကြေငြာချက်မတိုင်မီ ရက်ပိုင်းအလိုက ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ရွှေည၀ါကျောင်းတိုက်သို့ လာရောက်ကာ ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးမှာ သတင်းများထွက်ပေါ်လာခြင်း၊
စည့်အချက်များသည် ရွှေည၀ါနှင့် ရွှေည၀ါကို လေးစားထောက်ခံသော ရဟန်းပျိုသံဃာများနှင့် ဒယကာ ဒါယိကာမများ ကို တမင် ဒေါသဖြစ် ပေါက်ကွဲ ဆူပူမှုဖြစ်အောင် အကွက်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မဟန အဖွဲ့ကိုလည်း ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေပြီး၊ ရွှေည၀ါနှင့် မဟနကို တမင် ထိပ်တိုက်တွေ့ စေရန် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောက်စရာကောင်းလှပေစွ၊ အကြံပက်စက်လှသည်။
နောက်ကွယ်မှာ ထို့ထက်နက်ရှိုင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့ရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့NLD ကြာင့် ရွှေည၀ါဆရာတော် ဒုက္ခရောက်သွားသည် ဟုသောအမြင်ကို ဖြစ်စေချင်သည်။ သံဃာထု၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ထောက်ခံမှုကို ဖြိုခွဲချင်သည်။ အစိုးရကို အကျပ်တွေ့စေချင်သည်။ အစိုးရကနောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်နေသည်ဟု အများကိုမြင်စေပြီး အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအကြား သံသယများဖြစ်စေလိုသည်။ အောင်သောင်းနှင့် အပေါင်းအပါများ၏ လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
မဟန ဆရာတော် ၄၇ ပါးစလုံးဖုန်းများပိတ်ထားကြသည်။ မီဒီယာသမားများ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု မလုပ်နိုင်ကြပါ။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု မပြုနိုင်အောင်လည်း လမ်းကြောင်းများပိတ်ဆို့ထားကြသည်။ စောင့်ကြည့်နေသောလူထုကြီး စိတ်မရှည်ဖြစ်လာသည်။ အကွက်စေ့လှပါပေ့ အောင်သောင်းရယ်။
ဦးအောင်သောင်း နာမည်မကောင်းခဲ့ပါ။ တိုင်းပြည်ကို လက်ညှိုးထိုးရောင်စား၊ ဆွေမျိုးသားချင်းကောင်းစားရေးလုပ်သူဟုနာမည်ထွက်နေသည်။ နုရင်ဘတ်ခုံရုံးကို ကြောက်သူဟုလည်း ကြားဖူးသည်။ ဒီပဲရင်းကိစ္စတွင်နောက်ကွယ်မှ အဓိက ကြိုးကိုင်သူဖြစ်သည်။ သူ့တွင်ထူးခြားသော အရည်အချင်းရှိသည်။ ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် ပြောနိုင်သည်။ ဒီတွင် မဟန ကိုယ်တော်ကြီးများ မျက်စိလည်ကုန်တာဖြစ်နိုင်သည်။ အောင်သောင်းတစ်ယောက် ဘုန်းကြီးတွေနားကပ်ပြီး ဘာလုပ်တာလဲ လူတိုင်းသိသည်။ အောင်သောင်းတစ်ယောက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားနာလိုသဖြင့် ဘုန်းကြီးနားကပ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ အောင်သောင်းလိုလူမျိုးကို နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောလို့ ရ မရ ရင်းနှီးသောဆရာတော်များ အသိဆုံးပင်။
ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အောင်သောင်းပူပန်နေသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ၏ အပုပ်နံ့များလည်းထွက်လာနိုင်သည်။ အစိုးရနှင့်လွှတ်တော်ကို အောင်သောင်း ချည်းကပ် သွေးထိုးနေသည်။ ရလာဒ်က ယခုအချိန်အထိ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အချိန်စာရင်းမထုတ်ပြန်နိုင်သေး။ အောင်သောင်းတွင် နောက်ခံခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေသေးသည်။
အခြေအနေ အချိုးအကွေ့တစ်ခုမရောက်ခင်၊ တိုးတက်မှုများနောက်ပြန်မဆုတ်ခင်၊ တစ်ဦးနှင်တစ်ဦး သံသယများ မဖြစ်ပေါ်ခင် အားလုံးဝိုင်းဝန်းဖို့လိုသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသော၊ အမျှော်အမြင်ရှိသော ပညာရှင်များ လိုအပ်နေသည်။ ၀ိုင်ဝန်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါ။
သားရွှေအိုးထမ်းလာမည့် လမ်းကြောင်းဖော်ပေးကြပါ။ အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူအများက နောက်ကလိုက်ဖို့ အသင့်ရှိနေသည်။